Nabata maka igwe ịkpụ laser |
Mpempe akwụkwọ na anwụrụ laser ọnwụ igwe
Otu esi eme nchekwa mmiri nke igwe ịkpụ laser
N'ebe ụfọdụ, ikuku oyi na -apụ naanị na Machị afọ ọ bụla. Agbanyeghị na ọnọdụ okpomọkụ na -ebilite n'ọnwa Eprel, Qingming na Guyu bụ oge udu mmiri. Tinyere oge udu mmiri na Mee na June, enwere ike ịsị na ọkara mbụ nke afọ niile bụ iru mmiri. Ka ọnọdụ okpomọkụ na -ebili, hu ...
Kedu ụlọ ọrụ na-achọ igwe ịcha akwa eriri laser
Igwe eji egbutu eriri ọkụ nwere ike dị elu nwere oke ziri ezi, ọsọ ọsọ, warara warara, obere ntụpọ, elu ịchafụ dị larịị na-enweghị burrs, isi laser anaghị emetụ ihe na-arụ ọrụ, enweghị ntụpọ na nrụrụ, yana arụmọrụ ya bụ okpukpu abụọ nke otu ike. Igwe laser CO2. Mmekọrịta ahụ ...
Kedu ihe na -emetụta igwe ịcha igwe na -ahazi izizi
E jiri ya tụnyere usoro nhazi ọdịnala, igwe ịkpụ laser nwere ezigbo nhazi nhazi yana nsonaazụ akụkụ ka mma, ọ dịghịkwa nhazi nke abụọ achọrọ. Nke a bụkwa ihe kpatara na ọtụtụ ụlọ ọrụ na -ahọrọ igwe ịcha laser. Agbanyeghị, ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ...
Uru nke igwe ịkpụ igwe Cheeron na ụlọ ọrụ akụrụngwa
Ka ụlọ ọrụ ngwaike nke China na-aga n'ihu na-abawanye ịhazi mba na ịdị mma ngwaahịa n'okpuru amụma nke ihe ọhụrụ na-eduzi na ịdị mma nke mbụ, ụlọ ọrụ ngwaike China na-enwe mmepe ngwa ngwa na mmepụta na ire ahịa. Akụrụngwa na -arụ ọrụ na -arịwanye elu na vario ...
Arụ ọrụ Ụkpụrụ na Uru Of Fiber Laser Ịcha Machine
Igwe eji egbutu eriri fiber bụ ihe mepụtara ọhụrụ nke igwe ihe ọgbara ọhụrụ. Kedu ka ọ si arụ ọrụ dị ka igwe ka mma nke igwe ịcha laser? E jiri ya tụnyere igwe ịchacha gara aga, kedu uru ndị pụtara ìhè, nke mere na ọha nabatara ya ozugbo ọ bụ ...
Akwụkwọ ntuziaka maka nchekwa mmiri Chiller n'oge ọkọchị
1, Gburugburu Ebe nrụnye Chiller nwere wheel nke ụwa niile, ekwesịrị idobe ya na ebe ikuku na-adị mma iji hụ na ikpo ọkụ dị mma. Dị ka egosiri na foto dị mma, ekwesịrị inwe oghere dị mita 1 gburugburu ngalaba ahụ, enweghị ihe mgbochi, yana ịdị elu dị n'elu ...
Waya N'ihi Laser ịgbado ọkụ Machine
Dayameta waya 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm. 1.6mm Ọ bụrụ na ọkpụrụkpụ ihe anaghị erughị 1mm, oghere dị n'etiti akụkụ abụọ kwesịrị ịbụ ihe na -erughị 0.15mm Ọ bụrụ na ọkpụrụkpụ mpempe akwụkwọ karịrị 1mm, oghere 0.7mm waya dayameta 1mm, oghere 1.2mm, dayameta waya 1.6mmN'ihi na ihe ahụ dị oke mkpa, ma ọ bụrụ oghere ahụ buru oke ibu, gbazee ...
Otu esi amata ogo mpempe akwụkwọ na igwe ịkpụ ọkpọ laser
site na nchịkwa na 21-03-22
Dị ka igwe na-arụ ọrụ nke ọma, mpempe akwụkwọ na paịpụ nwere ebumnuche ịkpụ laser nwere ọtụtụ ihe na nhazi na n'ichepụta ụlọ ọrụ. Agbanyeghị, ọtụtụ mmadụ amaghị ogo ngwaahịa a mgbe ha họọrọ iji ya, yabụ kedu ka esi ekpe ya ikpe? Ọzọ, Cheeron Laser ga ...
Mmetụta nke ọsọ na ịcha mma
1. Mmetụta nke oke ọsọ ọsọ na ịcha mma: * Ọ nwere ike bute enweghị ike ịkpụ na ọkụ na -efesa; * Enwere ike gbanyụọ mpaghara ụfọdụ, mana enweghị ike bipụ mpaghara ụfọdụ; * Mee ka ngalaba ịchacha ya buru ibu, mana enwere ntụpọ agbaze; * Ọsọ dị oke ọsọ, na -eme ka mpempe akwụkwọ ahụ b ...
Kedu ihe na -ebute ngbanwe nke igwe ịkpụ eriri eriri na usoro ịcha?
site na nchịkwa na 21-01-25
Site na mmepe na -aga n'ihu na teknụzụ ụlọ, mgbe ọtụtụ ụlọ ọrụ na -eji igwe ịkpụ laser eriri maka nhazi ọrụ, ha nwere ike ọ bụghị naanị ịchekwa ụgwọ kamakwa meziwanye nrụpụta nrụpụta, mana enwere ọtụtụ ihe kpatara njehie na usoro ịcha na nsonaazụ mbepụ adịghị mma n'oge .. .
Kedu ihe ị ga -akpachapụ anya maka nesting nke igwe ịcha laser?
1.Parts spacing N'ozuzu, mgbe ị na -egbutu nnukwu efere na efere ọkụ, anya dị n'etiti akụkụ kwesịrị ibu ibu, n'ihi na mmetụta ọkụ nke efere buru ibu na efere dị ọkụ ka ukwuu. Mgbe ị na -egbutu nkuku na obere eserese, ọ dị mfe ịgba ọnụ ya ma metụta ịdị mma ya. ...
Kedu ihe ịkpụ laser dị elu
Iji eriri ọkụ njupụta dị elu dị ka ihe eji egbutu ihe na-ebipu ihe ọkụ ọkụ HIGH-POWER laser cutting dúró maka? Ọdịdị dị elu dị elu arụmọrụ dị elu na-abụghị kọntaktị Ịcha ihe dị iche iche na-eme mgbanwe na mgbanwe Olee otu esi kọwaa ihe nlele ruru eru? Otu esi egbutu qual ...